एकाबिहानै काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का, सचेत रहन आग्रह ! – Ujyaalo Patrika
एकाबिहानै काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का, सचेत रहन आग्रह !
Previous राशी अनुसार यस्ता पर्स बोक्नुहोस् : जिवनमा पैसाको अभाव कहिलै हुँदैन,कुन राशीले कस्तो बोक्ने ?
Next तापक्रम ५० डिग्री पुगेपछि दुबईमा गराइयो कृतिम वर्षा ! कसरि गराइन्छ कृतिम वर्षा ?